Getting more personal | Hery - Tsiky dia ampy
2008-10-16 @ 07:33 in Izaho sy ny ahy
Ny lohateny fotsiny no teny anglisy. Miverina amin'ilay resaka hoe "Inona no misakana anao tsy hanana blaogy" aho. Hitako fa ny tena misakana ahy tsy hanoratra matetika dia tsy hoe ny hosoratana no tsy misy fa izay tiako hosoratana rehetra toa zavatra mikasika ahy manokana avokoa. Tamin'ny mbola tsy be mpamaky ny blaogy dia tsy olana firy, fa rehefa manomboka betsaka ny mpamaky, ka miparitaka amin'ny RSS etsy sy eroa, dia misalasala ihany ny tena hanoratra.
Lasa toy ny manao tadimody (cercle vicieux) ilay izy izany rehefa tena dinihina. Rehefa manoratra betsaka kokoa ianao dia be mpamaky kokoa, dia voatery manoratra betsaka kokoa, kanefa ny betsaka misy dia ny fiainanao andavanandro... dia lasa ho blaogy manokana be ilay blaogy.
... Dia maninona anefa?...
Fa angaha moa voatery ho an'ny olona no hanaovana blaogy? Fa angaha tsy hitehirizana izay zavatra mitranga fotsiny koa toy ny diary?
Fa angaha moa rehefa hoe zavatra manokana dia ho ratsy?
Fa angaha moa hisy hivaky loha amin'izay momba anao manokana any raha tsy hoe malaza ianao? Ah, raha mamoaka ny fiainanao manokana ianao no mbola misy liana mamaky ihany ny olona dia efa manomboka malaza izany :-) ka inona no olana?
Fa angaha moa izay tian'ny olona hovakiana no soratana fa tsy izay tianao hosoratana no vakian'ny olona?
Fa angaha moa terena hamaky ny blaoginao ny olona?
... Noho izany...
Hiverina hiblaogy indray aho, ary ho betsaka ny zavatra manokana isankarazany. Toy ny hoe herintaona toa izao izahay no nandeha tany Dago. Toy ny hoe efa mitondra fiara indray aho izao rehefa avy tsy nitondra nandritra ny 8 volana. Toy ny hoe efa mahatratra 70 kg aho izao (grrr) sy ny sisa.
Asakasak'izay hamaky :-)
/me is deleting hery.blaogy.com from my RSS list. (vazivaziko kanjony).
Ny an'ny sasany aza resaka string sy boxer sy coulotte hita aparitaka eny @ réseau social koa. Mbola mahaliana ny hafa foana...
Nampidirin'i DotMG @ 08:26, 2008-10-16 [Valio]
Aza menamenatra izany moa fa arosoy eo iaraha-mahita e
Nampidirin'i tomavana @ 12:29, 2008-10-16 [Valio]
Ho teraka ato ho ato i Te hijery an i Hery :))
Nampidirin'i p @ 17:01, 2008-10-16 [Valio]
Toa manao coming-out Hery le! :D
Mamaky faona hatrany e! :)
Nampidirin'i Tattum @ 18:18, 2008-10-16 [Valio]
inona no misakana anao tsy hiresaka momba anao manokana ?
Ny coulotte aza tonga dia manintona ny mason'ny olona nefa raha soutane izao na aube no nosoratako teo dia nodinganin'ny olona (indrindra ilay bandy kely izay daholo ny pejin'ilay ranamana io (fampakarana audimat zany an - hihihi :-D :-D).
Nann fa raha io resaka "coulotte" io no nasiako "sottana" teo akaikiny (= soutane, saingy en italien jupon no dikany) dia mety mbola nikorapapà ny mahay teny lita namaky hoe inona hono ?)
Nampidirin'i ikalamako @ 21:10, 2008-10-16 [Valio]
Rehefa tsy mandainga @ tenanao angamba enao dia tsy maninona.
Ny tena mampihemotra ny olona (izaho anisany) @ ilay manolotra be loatra ny resaka momba anao manokana manko dia lasa mamaritra anao ihany koa ilay blaogy avy eo. Azo hitsarana anao ihany koa izany iny @ lafiny iray. Ny zavatra soratanao anio hitsarana anao ampitso... ra vao- "fake" zany dia mamato-tena wazy eo hihi
sinon, ireto ny mot mazika:
* ze tiako ihany io eee
* za hirara
Nampidirin'i simp @ 21:11, 2008-10-16 [Valio]
oups - hadino nanidy ny fononteny taorian'ny teny hoe ...ilay bandy kely izay" :-P
(manjary tsy mazava ny fehezanteny)
Nampidirin'i ikalamako @ 21:12, 2008-10-16 [Valio]
miangavy an'i DotMg
hanazava kokoa ny resaka coulotte :P
Nampidirin'i simp @ 21:16, 2008-10-16 [Valio]
io hoa fa vao misoratra noir sur blanc na noir sur jaune le coulotte dia voatsafa !
Marina mihitsy anie ny nosoratan'ilay tompon-trano hoe "tontolo tsisy string dia toy ny tontolon'ny boxer" (mpanao totohondry zany) kanefa ny coulotte aza izao lasa mahazo salan'isa avoavo noho ny string ankehitriny.
Nampidirin'i ikalamako @ 21:20, 2008-10-16 [Valio]
zay mazoto mamaky foana na zourinaly intime na coulotte na angano na arira :))
Nampidirin'i maintikely @ 07:39, 2008-10-19 [Valio]